अभिनेत्रि मलाइका र अर्जुनको बिहे रोकियो , बिहेको तयारी हुदै गर्दा किन रोकियो त ? – Etajakhabar
अभिनेत्रि मलाइका र अर्जुनको बिहे रोकियो , बिहेको तयारी हुदै गर्दा किन रोकियो त ?
एजेन्सी – पछिल्लो समय बलिउडमा निकै नै चर्चामा आएका जोडी हुन् अभिनेत्रि मलाइका र अर्जुन कपुर । यी जोडी पछिल्लो समय निकै चर्चामा छन् । यी चर्चित जोडीले १९ अप्रिलमा विवाह गर्ने कुरा भएको थियो ।तर भारतिय मिडियाका अनुसार अर्जुन कपूर र अभिनेत्री मलाईका अरोडाले आफ्नो विवाह सारेको बताइएको छ । विवाहको मिति सर्नुको कारण भने बाहिर नआएको बताइएको छ ।
मिडियाका अनुसार अर्जुनको परिवारले यस सम्बन्धलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन् । भारतिय मिडियाका अनुसार फिल्म ‘इन्डियाज मोस्ट वान्टेड’ प्रचारको समयमा उनी आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्न नचाहेकोले विवाह सारिएको बताइएको छ ।
बुबा बोनी कपूर, बहिनी अंशुलाले अर्जुनसँग कुरा गर्ने कोशिश गरे पनि कुने फाइदा भएको छैन ।पछिल्लो दिनहरुमा मलाईकाले अर्जुनसँगको विवाहको खबरलाई खण्डन गरिरहेकी छिन् ।उनले विवाहको कुरामा कुनै सच्चाइ नभएको बताएकी छिइन । सअघि अरबाज र मलाइकाको २०१७ मा सम्बन्धविच्छेद भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०४, २०७६ समय: १९:०२:३९
अब सलमान खानको फिल्म ‘दबंग–३’ बाट सलमानकी भान्जी एजिला र महेकी छोरीले डेब्यू गर्ने